Shir beeleed lagu diidan yahay ansixinta Dastuurka dalka oo Berito lagu wado in lagu qabto Muqdisho
Loading...	Home Wararka Shir beeleed lagu diidan yahay ansixinta Dastuurka dalka oo Berito lagu wado in lagu qabto Muqdisho
Shir beeleed lagu diidan yahay ansixinta Dastuurka dalka oo Berito lagu wado in lagu qabto Muqdisho	Tuesday, 08 May 2012 18:40	Shir beeleed lagu diidan yahay ansixinta Dastuurka dalka oo Berito lagu wado in lagu qabto Muqdisho.
Xaaladda Magaalada Muqdisho ayaa aad u kacsan kaddib markii mid ka mid ah beelaha Hiraab ay bilowday qabanqaabada iyo diyaar garowga maalinta berri ah inay shir ku qabato magaalada Muqdisho gaar ahaan Hotelka Saxafi, shirkaas oo looga horjeedo ansixinta dastuurka iyo qorshaha Road Map-ka ee Soomaaliya.
Mid ka mid ah waxgaradka beelaha H/Gidir oo magaciisa qariyay ayaa shabakadaan u sheegay in maalinta berri ah magaalada Muqdisho ay ku qabanayaan shir looga horjeedo ansixinta dastuurka, wuxuuna nabadoonkaan sheegay in shirkaasi ay ka soo qeyb gelayaan Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka KMG ah, waxgaradka, odayaasha dhaqanka beelaha ka soo horjeeda ansixinta dastuurka.
Sidoo kale shirkaasi waxaa ka soo qeyb gelaya siyaasiyiinta, aqoonyahano, xubno ka socda ururrada bulshada iyo wakiilada beelaha Soomaaliyeed, kaasi oo looga hadlayo qaabka Dowladda KMG ah iyo ergeyga QM ee Soomaaliya ay ku wadaan arrimaha Soomaaliya oo shirka laga hor caddeyn doono khaladaadka dhinacaas ka jira.
Xulidda Baarlamaanka cusub, xulidda odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, ku takri falka awooda dhaqanka Soomaalida iyo eedeymo kale ayaa looga hadlayaa shirkaas, iyadoona dhinaca ammaanka la sheegayo in si heer sare ah loo sugayo.
Dhinaca kale dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan Dowladda KMG ah ay fashiliyeen shir looga horjeedo Dowladda KMG ah oo ka dhici lahaa isla Hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho, hase yeeshee waxaan la ogeyn qaabka shirka uu uga dhici karo magaalada Muqdisho oo waliba looga horjeedo hannaanka lagu doonayo in Soomaaliya lagu dhiso dowlad rasmi ah.
CIIDAMADA DOWLADA IYO KUWA AMISOM OO DAD KU QABQABTAY DEGMADA WAABARI EE MAGAALADA MUQDISHOSaturday, 25 May 2013 DHAGEYSO JAAKIYADDA BEESHA SHEEKHAAL EE DALKA JARMALKA OO TAAGEERO U DIRAYA MADAXWEYNE XASAN XAAJISaturday, 25 May 2013 SHIRKII MADAXDA IGAD OO LEEYSKU RAACAY IN SHIRKA JUBOOYINKA AY DOWLADA QABATOFriday, 24 May 2013 HAMBALYO MEHER LIIBAAN CABDI MAXAMUUD IYO SACDIYO MAXAMUUD CABDI ENKÖPING SWEDANFriday, 24 May 2013 RABSHADIHII KA DHACAAYAY MAALMAHAN STOCKHOLM OO WALI SII SOCDA (DAAWO MASAWIRADA)Friday, 24 May 2013 Main Menu
CIIDAMADA DOWLADA IYO KUWA AMISOM OO DAD KU QABQABTAY DEGMADA WAABARI EE MAGAALADA MUQDISHO
DHAGEYSO JAAKIYADDA BEESHA SHEEKHAAL EE DALKA JARMALKA OO TAAGEERO U DIRAYA MADAXWEYNE XASAN XAAJI